सेञ्चुरी बैंकले सुरू गर्यो सेञ्चुरी सहज खाता र सेञ्चुरी क्लीक एकाउन्ट, घरमै बसेर शुन्य मौज्दातमा खाता खोल्न सकिने « Bizkhabar Online
सेञ्चुरी बैंकले सुरू गर्यो सेञ्चुरी सहज खाता र सेञ्चुरी क्लीक एकाउन्ट, घरमै बसेर शुन्य मौज्दातमा खाता खोल्न सकिने
21 November, 2020 9:12 am
काठमाडाैं । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले सेञ्चुरी सहज खाता र सेञ्चुरी क्लीक एकाउन्ट भन्ने दुई प्रकारको अनलाइन एकाउन्ट सेवा सुरू गरेकाे छ । काेभिड १९ को कारणले गर्दा बैंकका सेवाग्राहिहरुलाई पर्न गएको विभिन्न बैंकिङ्ग समस्याको समाधानको निम्ति सेन्चुरी बैंकले साे सेवा सुचारू गरेकाे हाे ।
ग्राहकहरुले घरमै बसेर शुन्य मौज्दातमा खोलिने उक्त खाताहरुमा बैंकले वार्षिक ५.५० % को दरले त्रैमासिक रुपमा ब्याज भुक्तानी गर्ने बैंकले जनाएकाे छ । बचत खातामा उच्चतम प्रतिफलका साथ खोल्न मिल्ने उक्त खाताहरु Digitally खुल्ने र ग्राहकहरु बैंकमा उपस्थित हुन नपर्ने हुँदा Digital Banking लाई प्राथमिकता दिँदै उक्त बचत खाताहरुमा प्रवर्द्धनको निम्ति बढि ब्याजदर दिइएको हो ।
सेञ्चुरी सहज खातामा नयाँ ग्राहकले खाता खोल्नको साथै उक्त खातामा तुरुन्तै पैसा जम्मा गरी Century Pay मार्फत Wallet को कारोबार समेत गर्न सकिनेछ । यस नयाँ सेवा मार्फत ग्राहकवर्गहरुले विभिन्न डिजिटल माध्यमबाट प्रति दिन रु. ५,००० बराबर Cash Less कारोबार गर्न सक्नेछन् । उक्त खातामा वार्षिक रु. १,००,००० सम्म कारोवार गर्न सकिनेछ ।
सेञ्चुरी क्लीक एकाउन्टमा नयाँ ग्राहकले अनलाइन बाटै खाता खोल्नको साथै उक्त खातामा तुरुन्तै पैसा जम्मा गर्न सकिन्छ । उक्त खातामा वार्षिक रु. १५,००,००० सम्म कारोवार समेत गर्न सकिनेछ । विशेष गरी विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई लक्षित गरि बैंकले यो खाता संचालनमा ल्याएको हो ।
उक्त खाताहरु खोल्दा आवश्यक Verification code बैंकले आधिकारिक मोबाइलमा वा ईमेलमा उपलब्ध गराउने र सहजै खाता खोल्न र सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।
बैंकको अनलाइन एकाउन्ट सेवा https://onlineaccount.centurybank.com.np/ बाट लिन सकिने बैंकले जनाएकाे छ
काठमाडौं । दराजले ‘बैंक डे अफर’ का लागि माछापुच्छ्रे बैंकसँग साझेदारी गरेको छ । एस
काठमाडौं । हाल साना निक्षेपकर्तालाई बचतमा न्युन ब्याज प्राप्त भई लगानीको प्रतिफल सन्तोषजनक नरहेको अवस्थामा
मेगा बैंकको स्मार्ट फोनबाटै कर्जा सुविधा, फोनबाटै दुई लाखसम्मको कर्जा सजिलै प्राप्त गर्न सकिने
काठमाडौं । मेगा बैंक नेपालले आफ्ना ग्राहकहरुको सुविधाका लागि स्मार्ट फोनबाटै तत्कालै प्राप्त गर्न सकिने
कोराना पीडित ग्राहकलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सहुलियत, ब्याज रकममा १० प्रतिशत छुट
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले कोभिडबाट प्रभावित ग्राहकहरुलाई प्रचलित ब्याज रकममा १० प्रतिशत छुट दिने